यूहन्ना १४ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
१४ “तिमीहरूको मन विचलित नहोस्। परमेश्वरमाथि विश्वास गर, अनि ममाथि पनि विश्वास गर। २ मेरो बुबाको घरमा बस्ने ठाउँ धेरै छ। त्यसो नहुँदो हो त तिमीहरूलाई मैले भन्ने थिएँ। म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न जाँदैछु। ३ यदि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारें भने म फेरि आउनेछु अनि तिमीहरूलाई मेरो घरमा लैजानेछु र म जहाँ हुन्छु, तिमीहरू पनि त्यहीं हुनेछौ। ४ अनि म जहाँ जाँदैछु, त्यहाँ जाने बाटो तिमीहरूलाई थाह छ।” ५ थोमाले उहाँलाई भने: “प्रभु, तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, हामीलाई थाह छैन। तब कसरी हामीलाई त्यहाँ जाने बाटो थाह हुन्छ र?” ६ येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “बाटो, सत्य र जीवन मै हुँ। मबाहेक अरू कसैद्वारा कोही पनि बुबाकहाँ जान सक्दैन। ७ यदि तिमीहरूले मलाई चिनेका छौ भने मेरो बुबालाई पनि चिन्नेछौ; अबदेखि तिमीहरूले उहाँलाई चिन्नेछौ अनि वास्तवमा तिमीहरूले उहाँलाई देखिसकेका छौ।” ८ फिलिपले उहाँलाई भने: “प्रभु हामीलाई बुबा देखाइदिनुहोस्, त्यति भए हामीलाई पुग्छ।” ९ येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “मैले तिमीहरूसित यति लामो समय बिताएँ, तैपनि तिमी मलाई चिन्दैनौ, फिलिप? जसले मलाई देखेको छ, उसले बुबालाई पनि देखेको छ। तब कसरी तिमी ‘हामीलाई बुबा देखाइदिनुहोस्’ भन्छौ? १० म बुबासित एकतामा छु र बुबा मसित एकतामा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? म तिमीहरूलाई जे भन्छु, त्यो आफ्नै तर्फबाट भन्दिनँ; तर मसित एकतामा हुनुहुने बुबाले आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ। ११ म बुबासित एकतामा छु र बुबा मसित एकतामा हुनुहुन्छ भनेर मलाई विश्वास गर; होइन भने मैले गरेका कामहरूको आधारमा भए पनि विश्वास गर। १२ तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, जसले ममाथि विश्वास गर्छ, मैले गरेको काम उसले पनि गर्नेछ; र तीभन्दा पनि ठूला कामहरू गर्नेछ, किनकि म बुबाकहाँ जाँदैछु। १३ साथै, तिमीहरूले मेरो नाममा जेसुकै मागे तापनि म त्यो गर्नेछु, ताकि छोराद्वारा बुबाको महिमा होस्। १४ यदि तिमीहरूले मेरो नाममा केही माग्यौ भने म त्यो गर्नेछु। १५ “यदि तिमीहरू मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ; १६ अनि बुबालाई म बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूसित सधैंभरि रहिरहने अर्को मदतगार तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ, १७ अर्थात्‌ सत्य प्रकट गर्ने पवित्र शक्ति, जुन संसारले पाउन सक्दैन, किनकि त्यसले पवित्र शक्तिलाई न देख्छ न त चिन्छ। तर तिमीहरू पवित्र शक्तिलाई चिन्छौ, किनकि त्यो तिमीहरूसित रहन्छ अनि तिमीहरूसित छ। १८ म तिमीहरूलाई शोकाकुल अवस्थामा छोड्दिनँ। म तिमीहरूकहाँ आउँदैछु। १९ अब केही बेरपछि संसारले मलाई देख्नेछैन तर तिमीहरूले भने देख्नेछौ, किनकि म जीवितै छु अनि तिमीहरू पनि जीवितै रहनेछौ। २० त्यस दिन तिमीहरूले थाह पाउनेछौ, म बुबासित एकतामा छु र तिमीहरू मसित एकतामा छौ अनि म तिमीहरूसित एकतामा छु। २१ जसले मेरा आज्ञाहरू ग्रहण गर्छ र ती पालन गर्छ, मलाई प्रेम गर्ने ऊ नै हो। जसले मलाई प्रेम गर्छ, उसलाई मेरो बुबाले पनि प्रेम गर्नुहुनेछ र म उसलाई प्रेम गर्नेछु अनि ऊसामु म खुलेर प्रकट हुनेछु।” २२ तब यहूदाले (तर इस्करियोत होइन) उहाँलाई सोधे: “प्रभु, तपाईं किन हामीसामु खुलेर प्रकट हुन चाहनुहुन्छ तर संसारसामु भने प्रकट हुन चाहनुहुन्न?” २३ येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो: “यदि कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने उसले मेरो वचन पालन गर्नेछ र मेरो बुबाले उसलाई प्रेम गर्नुहुनेछ अनि हामी उसकहाँ जानेछौं र ऊसित बस्नेछौं। २४ जसले मलाई प्रेम गर्दैन, उसले मेरा वचनहरू पालन गर्दैन; अनि तिमीहरूले सुनिरहेको वचन मेरो होइन तर मलाई पठाउनुहुने बुबाको हो। २५ “तिमीहरूसित होउन्जेल मैले सबै कुरा तिमीहरूलाई बताएको छु। २६ तर बुबाले मेरो नाममा पठाउनुहुने मदतगार अर्थात्‌ पवित्र शक्तिले* तिमीहरूलाई बाँकी अरू कुरा सिकाउनेछ र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा स्मरण गराउनेछ। २७ म तिमीहरूलाई शान्ति छोडेर जान्छु, म तिमीहरूलाई मेरो शान्ति दिन्छु। मैले तिमीहरूलाई दिने शान्ति संसारले दिने शान्तिभन्दा फरक छ। त्यसैले तिमीहरूको मन विचलित नहोस् अनि डरले गर्दा कमजोर नहोस्। २८ म जाँदैछु अनि तिमीहरूकहाँ फेरि आउँदैछु भनी मैले तिमीहरूलाई भनेको तिमीहरूले सुन्यौ। यदि तिमीहरू मलाई प्रेम गर्छौ भने म बुबाकहाँ जाँदैछु भन्ने थाह पाएर खुसी हुनेछौ, किनकि मभन्दा बुबा महान्‌ हुनुहुन्छ। २९ अब यी कुराहरू हुनअघि नै मैले तिमीहरूलाई भनिदिएको छु, ताकि जब यी कुराहरू हुन्छन्‌, तब तिमीहरूले विश्वास गर्न सक। ३० अबउसो तिमीहरूसित म धेरै कुरा गर्नेछैन, किनकि यस संसारको शासक आउँदैछ। त्यसले ममाथि कुनै नियन्त्रण जमाउन सक्दैन, ३१ तर बुबाले मलाई दिनुभएको आज्ञा म पालन गर्दैछु, ताकि बुबालाई म प्रेम गर्छु भनी संसारले जानोस्। उठ, हामी यहाँबाट जाऔं।
^ यूह १४:२६ * ग्रीकमा न्युमा। अतिरिक्त लेख ७ख हेर्नुहोस्।